Wasiirka gaashaandhiga DF iyo taliyihii CXD oo iscasilay – Warfaafiye:
Wasiirka gaashaandhiga DF iyo taliyihii CXD oo iscasilay
Wasiirka gaashaandhiga Somalia, C/rashiid C/llaahi Maxamed iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Jen. Axmed Jimcaale Geedi (Cirfiid) ayaa iscasilay kadib markii ay gudbiyeen warqaaha iscasilaadooda.
Shirka Golaha Wasiirada lagu shaaciyay iscasilaada wasiirka gaashaandhiga, waxaana lagu micneeyay inuu wasiirku isu casilay arrimo shaqsi ah oo aan la faahfaahin, isagoo is casilaadiisa u gudbiyay Ra’iisal wasaare Xasan Cali Kheyre.
Wasiirka gaashaandhiga C/rashiid C/llaahi Maxamed ayaa golaha wasiirada ka codsaday inay ka aqbalaan iscasilaadiisa, taasoo ay goluhu aqbaleen.
Dhanka kale, Istiqaaladda taliyaha ciidamada xoogga dalka Jen. Cirfiid ayaa loo gudbiyay Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo oo aqbalay si-casiladda Taliyaha. Waxaana maanta lagu ansixiyay Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya shirkoodii Khamiislaha.
Madaxweyne Farmaajo ayaa xilka taliyaha ciidamada Xoogga dalka u magacaabay Gen. Cabdi Jaamac Warsame (Gorod), waxaana mudadda uu xilka hayay Jen. Cirfiid aya ahayd 6 bilood oo noqoneysa xilligii ugu yaraa ee taliye uu hayo xilkan.
Taliyaha cusub ee loo magacaabay xilka ayaa hore uga tirsanaa ciidamada cirka Soomalaiya isagoo soo noqday Duuliye, Waxaa kaloo dowladii C/qaasim ee KMG ahayd uu kasoo noqday Wasiirka Dekedaha.